काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट सुरुमा प्रभावित भएको छिमेकी चीनले नेपाललाई कोरोनाविरुद्ध लड्न आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमार्फत चीनले नेपाललाई के–के सहयोग र सहायता आवश्यक पर्छ भनेर लिस्ट समेत मागेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल कोरोना संक्रमणको सम्भावित दबाबमा रहेको र यसले नेपालको अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा प्रभाव पारेको भन्दै चीन यसबेला नेपाललाई सबैखाले सहायता दिन तयार रहेको जानकारी गराइएको छ । चीनले केही राष्ट्रलाई सहायता बढाउने नीति अनुरुप नेपालको आवश्यकता के हो भनेर सोधेको हो ।
चीनले नेपाललाई पठाएको पत्रमा सोधिएको छ–के नेपाल योबेला चीनको सहयोग र सहायता चाहान्छ ? जस्तो कि नेपाललाई उर्जामा सहायता चाहिएको हो ? नेपाललाई हामीले मास्क र अन्य मेडिकल सप्लाइजहरु सहितको मेडिकल टिम पठाउनुपर्छ ? हामी जुनसुकै बेला पनि तप्तर छौं ।
चीनले नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण अन्त्य भएसँगै नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक चीनबाटै पहिलो भ्रमण गराउन समेत चाहेको जनाएको छ । त्यस्तै उसले चीनले नेपालका विकास परियोजनाहरुमा तीब्रता दिइने समेत बताएको छ ।
चीनसँग आवश्यक सहयोगबारे छलफल भइरहेको कोरोना रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका संयोजक तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले बताए ।
उनले चीन र भारत दुवैतिरबाट सहयोगको कुरा आएको प्रष्ट पार्दै नेपाल सबै छिमेकीहरुसँग मिलेर यो महामारी विरुद्ध लड्न सक्षम रहेको बताए । यसअघि नेपालले चीनलाई कोरोनाविरुद्ध लड्न १ लाख मास्क पठाएर ऐक्यवद्धता जनाएको थियो । -फाेटाे फाइल
<<< : कारोना प्रभाव : एसईई परीक्षा नरोकिने, अन्य परीक्षा र भर्ना नहुने
‘बी’ डिभिजन लिग रोकियो : >>>